Miyey Jirtaa Koox Garaaci Karta Liverpool? - Virgil van Dijk Oo Ka Jawaabay Su'aashan Iyo Wixii Uu Ku Yidhi Joe Gomez Markii Ay Isku Dhaceen Raheem Sterling | Laacib.net
January 25, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Miyey Jirtaa Koox Garaaci Karta Liverpool? – Virgil van Dijk Oo Ka Jawaabay Su’aashan Iyo Wixii Uu Ku Yidhi Joe Gomez Markii Ay Isku Dhaceen Raheem Sterling
Liverpool ayaa wacdaro layaab leh ka dhigaysa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, waxaanay soo guuleysatay 22 ka mid ah 23-kii ciyaarood ee xili ciyaareedkan ay dheeshay, laakiin rikoodhka guul-darro la’aanta ee ay haysataa waxa uu gaadhay 40 ciyaarood oo xidhiidh ah.
Guushii 2-1 ahayd ee ay Khamiistii ka gaadhay Wolves, waxay Liverpool ku barbarraysay rikoodhkii Chelsea ee ahaa 40 ciyaarood oo aan dhinacooda dhulka la dhigin, waxaanay Blues samaysay waqtigii uu Jose Mourinho u yimid ee ugu horreeyey.
Guusha u dambaysay waxay keentay dood ah in Liverpool ay tahay koox laga adkaan karo iyo in kale, waxaana su’aashaas la hor dhigay difaaca birta ah ee Virgil van Dijk oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee Reds ay u noqotay koox aan laga badin karaynin.
Daafaca reer Netherland, waxa uu sheegay in iyagu koox ahaan aanay dareensanayn inay yihiin koox aan laga badin karin inkasta oo ay wacdaro ka dhigayaan horyaalka Premier League, waxaanu yidhi: “Waligaa ma dareemaysid inaan lagu garaaci karin, mana aha dareen aanu qabno.”
Virgil van Dijk waxa uu tilmaamay in ay ku dedaalayaan inay wali horumar ciyaareed sii sameeyaan, qof walba oo iyaga ka mid ahna uu dareemayo inay ku jiraaan xaalad wanaagsan, waxanu yidhi: “Kaliya waxaanu isku dayaynaa inaanu sii horumarno, wax walbana si fiican ayay noogu socdaan waqtigan oo qof walba oo naga mid ahi wuxuu ku jiraa xaalad wanaagsan.”
Hoggaamintiisa dabiiciga ah ee garoonka dhexdiisa, waxa kale oo u raaca Virgil van Dijk talooyinka uu ciyaartoyga siiyo waqtiga ay ku jiraan xaaladaha adag, waxaana uu si cad u qirtay inuu waano iyo wax u sheegba u sameeyey saaxiibkiisa Liverpool ee Joe Gomez oo bishii November ay isku dhaceen Raheem Sterling xilli ay tababar ku wada qaadanayaan xulka qaranka England.
“Dabcan waan la hadlay Joe waxaannan isku dayey inaan caawiyo. Isagu qalad kuma lahayn dhacdadaas, waanan la hadlay waqtigaas iyo markii uu kasoo laabtayba (Kusoo laabtay Liverpool). Aad ayaan ula dhacsanahay Joe, dhamaanteen waxaynu aragnay xili ciyaareedkii hore ka hor intii aanu dhaawacmay, sida uu u wanaagsan yahay iyo sida uu usii fiicnaan karo. Waa qof aanu aad isku fahamno gudaha garoonka iyo bannaankiisaba. Taasina dabcan way caawisaa.” Ayuu yidhi Virgil van Dijk.
Liverpool waxay Axadda berri u tegi doontaa kooxda yar ee Shrewsbury Town oo ay lasoo ciyaari doonto wareegga afraad ee tartanka FA Cup.